Home Wararka Tuulada Af-urur ee Gobolka Bari ee Puntland oo Al Shabaab weerar ku...
Tuulada Af-urur ee Gobolka Bari ee Puntland oo Al Shabaab weerar ku qaaday
Wararka ka imaanaya deegaanka Af-urur ee gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegayaa in halkaas Al-shabaab ay waaberigii saaka weerar ku qaadeen saldhig ku leeyihiin ciidamada Puntland.
Sida laga soo xigtay goobjoogayaal, Alshabaab ayaa weerarka ku bilowday hoobiyeyaal iyo hubka fudud, waxaana kadib xigay iska hor imaad toos ah oo dhexmaray ciidamada Puntland iyo kooxda Alshabaab. Weerarka oo bilowday ka hor salaadii subax ayaa wararku waxay sheegayaan in waagu isugu baryay ciidamada Puntland iyo kooxdii weerarka qaadday
Majiro ilaa hadda wax war ah oo kasoo baxay dhanka ciidanka Puntland iyo kooxda Shabaab. Alshabaab ayaa horey u weeraray Af-urur oo 70km u jirta magaalada Bosaso, iyagoo ka geysatay mid kamid ah weeraadii ugu khasaaraha badnaa ee Puntland.
In ka badan 50 askari oo katirsan ciiddanka Puntland ayay Alshabaab ku dishay weerar ay sannadkii 2017 ku qaaday deegaanka Afurur, kadib markii ay cagta mariyeen saldhig ciiddanka Puntland ku lahaayeen Afurur.
Previous article[DAAWO] Sheekh Sharif oo si toos ah ula saftay Villa Somalia
Next articleLafta Gareen oo la soo dardaarmay Xildhibaanada Koonfur Galbeed
Mid ka mid ah Ilaalada Hotel Shaamoow oo toogtay labo ruux...